Foddaan Amalootaa kan Ijaartuu Galmee yeroo mara amaloota mul'annoo Ijaartuu Galmee wanta ammee filame keessatti agarsiisa.
Yeroo jalqaba Ijaartuu Galmee irratti, foddaan amalootaa caancala fuula Deetaa galmee hundaaf agarsiisa.
Qabeentaa tarree keessaa gabatee filadhu, san booda Caancala dhiibi ykn ala saanduqa naqaa cuqaasuun saanduqa naqaa keessaa bahuu dandeessa.
Fuulli caancala Waliigala jedhu maqaa gabaasaa jijjiiruuf ni fayyada, fi kan biroo irraa naannawaa Irraantoo Fuulaa ykn Jalaantoo Fuulaa akka hin dandeenye gochuuf.
Wanta tokkollee osoo hin filin Irraantoo ykn Jalaantoo fuulaa yoo cuqaaste, naannawaa sanaaf caancala fuulaa Waliigala jedhu ni agarta.
Amaloota argaa tokko tokkoof naannawaaf gulaaluu dandeessa.
Wanta osoo hin filatin yoo naannawaa Baldhintaa cuqaaste, fuula caancala Waliigala naannawaa sanaaf ni agarta.
Amaloota tokko tokko haala gaariin qoonqessuu galmeewwan maxxansuu ifteessa.
Naannawaa Gadifageenyaa keessatti dirreeewwan deetaa tokko tokko galchi, naannawaa feeteetti dirree to'annaa galchi. Yoo dirree itti gala filatte, amaloota foddaa Amalootaa keessatti sirreessuu dandeessa.
Maxxaniitee dirreef, saanduqa naqa Maxxaniitee keessatti barruu argame jijjiiruu dandeessa.
Fakkaatiif, faayiliitti fakkaattii akka walqabsiisatti ykn faayilii Base keessatti akka wanta ida'ameetti galchuuf ifteessuu dandeessa. Filannoon wanta ida'amee hammamtaa faayilii Base ni dabala, gara biroon filannoon walqabsiisaa koompiyuutara biratti geessuu hin dandeeynu.
Fuula caancala dirree deetaa Waliigala irraa, kan biroo keessaa amalootaa dhangeessuu qindeessuu ni dandeessa.
Fuula caancala Deetaa irraa, qabeentotni deetaa akka mul'ataniif jijjiiruu dandeessa.